प्रचण्डलाई राजीनामा थमाएर हिँडेका पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले यसरी फलाएछन् ‘कालो चामल’ (भिडियो तथा फोटोफिचर) - Ratopati
कात्तिक ३० | राजेश भण्डारी, बिजु महर्जन/डिएनएन
‘यहाँ पूर्वमन्त्रीले धानखेती गरेको भन्या कहाँनिर हो ?’ करिब आधा दर्जनपटक सोधिखोजी गर्दै हामी भकुण्डेबेसीको ‘लामा जक्सन’मा पुग्यौं । काभ्रे जिल्लाको सुन्दर फाँट भकुण्डेबेसीभन्दा केही तल अवस्थित नौबिसेको ‘लामा जक्सन’ आजभोलि लोकेन्द्र विष्टको ‘चिया जक्सन’ बनेको छ ।
‘लामा जक्सन’को बायाँतिर एउटा गाडीमा धान लोड हुँदै थियो । पूर्व पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर धान झार्दै थिए । राजनीतिको मैदानमा सुटेड बुटेड भएर हिँड्ने एमाओवादी नेता विष्टले ‘प्याराग्लाइडिङ पोखरा’ प्रिन्टेड भेस्ट र सामान्य हाफ पाइन्ट पहिरिएका थिए ।
‘मेरो खेतीमा तपाईंहरूलाई स्वागत छ है,’ विष्ट मुस्कुराए । खलो नजिकै परालमाथि बस्दै विष्टले भने, ‘काटेको जत्ति आज झारिसक्नुपर्छ, धेरै त काट्नै बाँकी छ ।’
दाप्चा काशीखण्ड नगरपालिका–९ स्थित भकुण्डेबेसीमा विष्टले पहिलोपटक ‘जी–६०’ जातको कालो धान लगाएका छन् । ‘यसअघि भकुण्डेमा कसैले यस्तो धान लगाएकै थिएन, मैले एकैपटक ४३ रोपनीमा लगाएर पहिलो भएँ,’ उनले भने ।
राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा देश दौडाहामा निस्किरहने विष्टले गएको साउन पहिलो सातादेखि भकुण्डेबेसी छाडेनन् । ‘चार महिना भयो, बेला–बेला काठमाडौं जान्छु, अधिकांश समय यतै छु,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. गिरिराज त्रिपाठीले दक्षिण कोरियाबाट ल्याएर नेपालमा कालो धानको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए ।
विष्टले दाङ र बर्दियातिरबाट करिब ३२ केजी ‘जी–६० ब्ल्याक राइस’को बिउ जम्मा गरेर भकुण्डेको फाँटमा फलाए ।
असहमतिको अधिकार लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता हो । पार्टीप्रति २१ बुँदे असहमति राख्दै एमाओवादीबाट राजीनामा दिएका स्थायी समिति सदस्य विष्टको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन । पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामापत्र बुझाएको केही समयपछि काभ्रेका दुई युवा उनलाई भेट्न काठमाडौं पुगेका थिए । त्यही भेटमा उनले धानखेती गर्ने कुरा गरे । ‘उपयुक्त ठाउँ भकुण्डे हुन सक्छ, तर पानी त्यति छैन ।’ यत्ति भनेर काभ्रेली युवाहरू फर्केका थिए ।
त्यसको केही दिनमा विष्ट भकुण्डेबेसीतिर हानिए । ‘यहाँ आएपछि स्थानीय धर्मसिंह लामासित भेट भयो, उनैले जग्गाको प्रबन्ध मिलाइदिए,’ झरेको बालो टिपेर सुकाइराखेको धानमाथि फाल्दै विष्टले भने ।
१७ जना स्थानीयको जग्गा एक सिजनका लागि भाडामा लिएका विष्टसँग उनीहरूको कन्ट्याक सकिने दिन निकै नजिक आइसकेको छ । त्यसैले पनि धान भित्र्याउने चटारोमा छन् विष्ट ।
पश्चिम रुकुमको किसान परिवारमा जन्मेका विष्ट करिब ४५ वर्ष राजनीतिमा सक्रिय भए । जीवनको सुरुवाती समयमा खेती किसानीमै सक्रिय भए पनि राजनीतिमा लागेपछि उनी खेतीपातीबाट टाढिएका थिए ।
संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद् र सरकारको मन्त्री भएर काम गर्दा नयाँ अनुभूति भए पनि राजनीतिक जीवन निकै निरस भएको बताउँछन् विष्ट । ‘राजनीतिमा लागेपछि बोइलर कुखुराजस्तै भइएछ, जनता, श्रम, प्रकृति र गाउँबाट टाढा भएछौं, आजकाल बल्ल नजिकिएको अनुभूति हुँदै छ,’ उनले भने ।
रोपाइँ गर्दा होस् या रोपो गोड्दा उनी धेरै गाउँले मजदुरहरूसँग घुलमिल गरे । उनीहरूसँग काम गरे । यस्तो बेला भिआइपीले धान गोडेको देख्दा केही स्थानीयले भने, ‘सबै नेताले यस्तै गरे हुन्थ्यो नि !’
सबैले कहाँ त्यसो भने र ? केही खेतालाहरूले उनलाई भने, ‘तपाईं नगर्नुस्, हामीलाई सिकाउनुस्, यो हामीले गर्ने काम हो, तपाईं राजनीतिमै फर्कनुस् ।’
तर विष्टले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् बरु पानीको पालो मिलाउनेदेखि आधुनिक खेतीलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारेको किसान भेलाहरूमा सक्रिय बनिरहे ।
राजनीतिबाट टाढिएको छैन
खेतीमा लागेपछि पनि राष्ट्रिय राजनीतिबाट आफू टाढा नभएको बताउँछन् विष्ट । ‘धान काटिरहँदा होस या रोपाइँ गरिरहँदा राजनीतिका उतारचढावहरूबारे चासो चिन्ता भइरह्यो,’ उनले भने, ‘मान्छेले मलाई साइड लाग्यो भनेका होलान्, त्यस्तो हैन । पार्टी भित्रका समस्या, मन्त्री पदका लागि मेरा सहकर्मीहरूको ग्रन्थी रसाएको कुरा मज्जाले महसुस गरेको छु ।’
राजनीतिबाट बेखबर नरहेका विष्टले खेती सुरु गरेयता एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दुईपटक भेटिसकेका छन् । ‘अध्यक्षले पार्टीमा फिर्ता आउन भन्नुभएको थियो, मैले वर्ग र विचारको कुरा उठाएर राखेको २१ बुँदे फरक मतको सम्बोधन भएमा फर्किन सकिने कुरा गरेको छु,’ उनले भने, ‘म निराश भएर भागेको वा बाबुरामजस्तै छाडेर गएको हैन, पार्टीमै रहेर संघर्ष गर्दै छु ।’
एमाओवादीलको हेटौंडा महाधिवेशनले उत्पादन बिग्रेड बनाएर नेता कार्यकर्तालाई उत्पादनमा जोड्ने निर्णय गरेको थियो । हेटौंडामा पारित निर्णयले व्यावहारिक रुप लिनै सकेन । महाधिवेशनको निर्णय पार्टीले कार्यान्वयन नगरे पनि विष्टले त्यसलाई व्यक्तिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे । ‘यसले पार्टीपंक्तिमा नयाँ सन्देश दिएको छ, प्रचण्डले पनि खेती हेर्न आउँछु भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।
गत साता विष्टको धानखेत खोज्दै पुगे कृषि वैज्ञानिक केबी पौडेल । उनलाई देख्नासाथ पौडेलले भने, ‘ओहो, मन्त्रीज्यू, अहिले चैं असली किसान हुनुभएछ ।’
पानी र मलको अभावमा सोचे अनुसारको धान सपार्न नसकेको विष्टको व्याख्या सुनेपछि पौडेलले भने, ‘जेहोस्, तपाईंको प्रयास आमकिसानका लागि ठूलो हौसला हो ।’
बेलाबेला पुगिरहने पाहुनालाई बिदा गर्न विष्ट लामा जक्सनको चिया दोकानसम्म आउँछन् । चिया दोकानमा भन्दै थिए, ‘जनताको स्वास्थ्य राम्रो भए मात्र राष्ट्र स्वस्थ हुन्छ ।’
‘लामा जक्सन’ मा कागती चिया पिउँदै थिए, खेतबाट श्रीमती गंगाले फोन गरिन्, ‘खाजा लिएर छिटो आउनु है, ढिला भइसक्यो ।’
उनी दालमोठ, चिउरा लिएर खेततिर लागे । जहाँ आधा दर्जनभन्दा बढी खेतालाका साथमा जीवनसंगिनी गंगा बुढामगर एकसुरले काम गरिरहेकी थिइन् ।
कालो धानका विशेषता
‘जी–६० ब्ल्याक राइस’ उच्च पोषणयुक्त धान हो । एक व्यक्तिले एक दिनमा १५ ग्रामका दरले अन्य चामलमा मिसाएर खाएमा क्यान्सर, अल्जाइमर्स, मधुमेह र ब्लड प्रेसरजस्ता रोगविरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता तयार गर्ने विज्ञको भनाइ छ । अन्य चामलजस्तै गरी सेवन गरेमा उच्च पोषण तत्वका कारण कालो चामलको भात पचाउन सकिँदैन । पकाउनुअघि दुई घन्टा भिजाएरमात्रै पकाउनुपर्ने र भिजाएको पानीलाई सर्वतको रुपमा सेवन गर्दा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने बताइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रतिकेजी ७ सय रुपैयाँ मूल्य रहेको कालो चामलको मूल्य यस वर्ष अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
स्वास्थ्यवद्र्धक भएकाले यो धान स्थानीय र राष्ट्रिय बजारमा बिक्री हुन्छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यो धानको माग बढ्दै गएको छ ।